Abavakashi abavakashela eHawaii ngobuningi kodwa bachitha imali encane
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha zaseHawaii » Abavakashi abavakashela eHawaii ngobuningi kodwa bachitha imali encane
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha zaseHawaii • I-HITA • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • I-USA Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezihlukahlukene
Umugqa omude wama-udon noodle eWaikiki
Ngaphandle kokuthi izivakashi eziningi zisathutheleka eziqhingini zaseHawaii, ziza nemali encane emaphaketheni abo futhi zinciphisa ukusetshenziswa kwazo ngenkathi beseholidini. Kungaleso sizathu-ke imigqa eya ezindaweni ezingabizi kakhulu zama-noodle nasezitolo ezisebenza kalula yinde ukwedlula esezindaweni ezifana neCheesecake Factory. Ukuchitha imali ngoJulayi 2021 kwehle cishe ngama-7% kusuka emazingeni wangaphambi kwe-COVID-19 ngoJulayi 2019.
Ngaphambi kwe-COVID-19, iHawaii yabhekana nezindleko zabavakashi kanye nabafika ngo-2019 nasezinyangeni ezimbili zokuqala zika-2020.
NgoJulayi 2019, ukusetshenziswa kwezivakashi kwehle kwaba ngu-US $ 1.7 billion, ukwehla ngo-6.8%.
NgoJulayi ka-2020, zazingekho izibalo ezitholakalayo ekusetshenzisweni kwezivakashi ngoba azikho izinhlolovo zokuhamba ezenziwa ngenxa yemikhawulo ye-COVID-19.
“Uma singakwazi ukulawula futhi silawule ngempumelelo ukusabalala kokwehlukile kweDelta futhi kube nomthelela omubi ezinhlelweni zethu zokunakekelwa kwezempilo, nakanjani singalindela ukuthi uhambo, kufaka phakathi uhambo lwamazwe omhlaba, luqale ukubuya ngamandla maphakathi noNovemba futhi luqhubeke lukhule Isikhathi sokuvakasha ngamaholidi ngoDisemba 2021 nokuqhubeka kuze kube ngoJanuwari, uFebhuwari noMashi wango-2022, ”kusho uMike McCartney, onguMqondisi woMnyango Wezebhizinisi, Ukuthuthukiswa Kwezomnotho Nezokuvakasha (i-DBEDT) kanye noMengameli ophethe kanye noMphathi Omkhulu weHawaii Tourism Authority (HTA).
Ngokwezibalo zokuqala zezivakashi ezikhishwe nguMnyango Wezamabhizinisi, Ukuthuthukiswa Komnotho Nezokuvakasha (DBEDT) sezizonke ukusetshenziswa kwezivakashi Ukufika ngoJulayi 2021 kwakungu- $ 1.58 billion.
Ngaphambi kobhadane lomhlaba wonke lwe-COVID-19 kanye Imfuneko yokuhlukaniswa yedwa yabahambi, Iziqhingi zaseHawaii zithole izindleko zokufika kanye nokufika kwabavakashi ngonyaka we-2019 nasezinyangeni ezimbili zokuqala zika-2020. Ngokuqhathanisa, izibalo zokusebenzisa izivakashi zikaJulayi 2020 bezingatholakali njengoba bekungekho Ucwaningo Lokuhamba phakathi kuka-Ephreli kuya ku-Okthoba 2020 ngenxa ye-COVID-19 imikhawulo. Ukusetshenziswa kwezivakashi kwehle uma kuqhathaniswa ne- $ 1.70 billion (-6.8%) ngoJulayi 2019.
“Umnotho waseHawaii ubusendleleni ecacile yokusimama futhi ubudlondlobele ezinyangeni eziyisikhombisa zokuqala zonyaka wezi-2021. Sithole izindleko ezinamandla nokufika ngoJulayi kusuka emakethe yase-US edlula amazinga ka-2019 ngamaphesenti angama-29 (+ $ 339.3 million) ezindlekweni namaphesenti angama-21 (+ 145,267) yokufika. Isimenywa saseHawaii e-US sichitha imali engaphezulu kwama- $ 113 umuntu ngamunye ohambweni ngalunye ngo-2021, ”kusho uMcCartney.
“Lezi zinombolo ezirekhodiwe zisizwe ukufakwa kwezidingo zabathengi, ukuhlinzekwa ngokweqile kwezindiza, ukukhetha okulinganiselwe kokuhambela amazwe ehlobo kanye nokutheleka kwemali yokuvuselela umfelandawonye. Izinga lokululama jikelele ngoJulayi lalingamaphesenti angama-88 ngokufika okulinganiselwe kwamanye amazwe (amaphesenti amabili), ”wengeza.
Inani lezivakashi ezingama-879,551 ezafika ngensizakalo yezindiza eziqhingini zaseHawaii ngoJulayi 2021, ikakhulukazi ezivela e-US West nase-US East. Izivakashi ezingama-22,562 kuphela (+ 3,798.4%) ezafika ngendiza ngoJulayi 2020. Ukufika kwezivakashi ngoJulayi 2021 kwehle kusuka kusibalo sikaJulayi 2019 sezivakashi ezingama-995,210 (-11.6%).
NgoJulayi 2021, iningi labagibeli abafika bevela ngaphandle kwezwe futhi behamba phakathi kwesifunda bangadlula ukuhlukaniswa kokuzibophezela kukaHulumeni kwezinsuku eziyi-10 ngemiphumela yokuhlolwa ye-COVID-19 NAAT evumelekile evela ku-Trusted Testing Partner ngaphambi kokuhamba kwabo baye eHawaii. ngohlelo lwe-Safe Travels. Ngaphezu kwalokho, abantu ababegonywe ngokuphelele e-United States babengadlula ku-oda lokuhlukaniswa kwabantu kusukela ngoJulayi 8. Kwakungekho mingcele yokuhamba phakathi kwezifunda ngoJulayi. Izikhungo ze-US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zaphoqelela imikhawulo emikhunjini yemikhumbi ngokusebenzisa i- “Conditional Sail Order”, indlela enezigaba zokuqalisa kabusha kwemikhumbi yabagibeli ukunciphisa ubungozi bokusabalalisa i-COVID-19 ebhodini.
Ukubalwa kwabantu okujwayelekile kwansuku zonke kwakuyizivakashi ezingama-265,392 ngoJulayi 2021, uma kuqhathaniswa ne-17,970 ngoJulayi 2020, kuqhathaniswa nama-286,419 ngoJulayi 2019.
NgoJulayi 2021, izivakashi ezingama-578,629 zafika zivela e-US West, ngaphezulu kwezivakashi eziyi-12,890 (+ 4,388.9%) ngoJulayi 2020 futhi zeqa isibalo sikaJulayi 2019 sezivakashi ezingama-462,676 (+ 25.1%). Izivakashi zase-US West zisebenzise amaRandi ayizigidi ezingama-961.0 ngoJulayi 2021, okwedlula imali engamaRandi ayizigidi ezingama-669.8 (+ 43.5%) esetshenziswe ngoJulayi 2019. Imali esetshenzisiwe esezingeni eliphakeme yezivakashi yansuku zonke ($ 186 umuntu ngamunye, + 12.4%) nobude besikhathi sokuhlala obude (izinsuku eziyi-8.95, + 2.1%) futhi kube nomthelela ekukhuleni kwezindleko zezivakashi zase-US West uma kuqhathaniswa no-2019.
Kwakukhona izivakashi ezingama-272,821 ezivela e-US East ngoJulayi 2021, uma kuqhathaniswa nezivakashi ezingama-7,516 (+ 3,530.0%) ngoJulayi 2020, nezivakashi ezingama-243,498 (+ 12.0%) ngoJulayi 2019. Izivakashi zase-US East zisebenzise ama- $ 558.8 million ngoJulayi 2021 uma kuqhathaniswa no- $ 510.7 million (+ 9.4%) ngoJulayi 2019. Ukuhlala isikhathi eside (izinsuku eziyi-9.94, + 2.6%) nakho kube nomthelela ekwenyukeni kwezindleko zezivakashi zase-US East. Ukusetshenziswa kwansuku zonke ($ 206 umuntu ngamunye) bekuphansi uma kuqhathaniswa noJulayi 2019 ($ 216 umuntu ngamunye).
Kwakunabavakashi abangu-2,817 abavela eJapan ngoJulayi 2021, uma kuqhathaniswa nezivakashi ezingama-54 (+ 5,162.0%) ngoJulayi 2020, uma kuqhathaniswa nezivakashi eziyi-134,587 (-97.9%) ngoJulayi 2019. Izivakashi ezivela eJapan zachitha imali eyizigidi ezingama- $ 11.2 ngoJulayi 2021 uma kuqhathaniswa nezigidi ezingama- $ 186.5 (- 94.0%) ngoJulayi 2019.
NgoJulayi 2021, kwafika izivakashi eziyi-1,999 zivela eCanada, uma kuqhathaniswa nezivakashi ezingama-94 (+ 2,018.9%) ngoJulayi 2020, uma kuqhathaniswa nezivakashi ezingama-26,939 (-92.6%) ngoJulayi 2019. Izivakashi ezivela eCanada zisebenzise u- $ 5.5 million ngoJulayi 2021 uma kuqhathaniswa no- $ 50.1 million (- 88.9%) ngoJulayi 2019.
Kwakunabavakashi abangu-23,285 2021 abavela kuzo zonke ezinye izimakethe zomhlaba wonke ngoJulayi 2,008. Lezi zivakashi zazivela eGuam, Other Asia, Europe, Latin America, Oceania, Philippines nasePacific Islands. Uma kuqhathaniswa, bekukhona izivakashi ezingama-1.059.5 (+ 2020%) ezivela Kuzo Zonke Ezinye Izimakethe Zamazwe Ngamazwe ngoJulayi 127,510, uma kuqhathaniswa nezivakashi eziyi-81.7 (-2019%) ngoJulayi XNUMX.
NgoJulayi 2021, ingqikithi yezindiza ezingama-6,275 ze-trans-Pacific nezihlalo eziyi-1,292,738 zanikeza iziQhingi zaseHawaii, uma kuqhathaniswa nezindiza ezingama-741 nezihlalo eziyi-162,130 ngoJulayi 2020, uma kuqhathaniswa nezindiza ezingama-5,681 nezihlalo eziyi-1,254,165 ngoJulayi 2019.
Unyaka kuya ku-2021
Ezinyangeni eziyisikhombisa zokuqala zika-2021, isamba sokusetshenziswa kwezivakashi kwakungu- $ 6.60 billion. Lokhu bekumele ukwehla kwamaphesenti angama-37.5 kusuka ezigidini ezingama- $ 10.55 ezisetshenziswe ezinyangeni eziyisikhombisa zokuqala zika-2019.
Izivakashi ezingama-3,631,400 zifike ezinyangeni eziyisikhombisa zokuqala zonyaka wezi-2021, okuwukukhuphuka kwamaphesenti angama-66.7 kusukela onyakeni owedlule. Inani labantu abafikile belingaphansi ngamaphesenti angama-41.1 uma kuqhathaniswa nezivakashi ezingama-6,166,392 ezinyangeni eziyisikhombisa zokuqala zonyaka wezi-2019.
“Njengoba siqeda isizini ephezulu yehlobo futhi singena ngenkathi yokuwa ehamba kancane sizohlangabezana nokwehla okungokwemvelo kokufika okuvela emakethe yase-US ngalesi sikhathi sendabuko sehlombe. Ngalesi sikhathi, asinakho okusha okufikayo okuvela kwamanye amazwe, ngakho-ke kulindeleke ukuthi kuhamba kancane kunokujwayelekile emakethe yonke. Imakethe nayo kulindeleke ukuthi ithambe njengoba sibona ukwehla kwezinga lokubhuka ngokuzayo ngenxa yokungaqiniseki okudalwe ngokuhlukahluka kwe-COVID-19 Delta. Silindele ukuthi ukufika kuzoncipha ngoSepthemba nango-Okthoba kusuka ngemuva kwempelasonto yoSuku Lwabasebenzi. Abafikayo bangacwilisa phakathi kobubanzi obungamaphesenti angama-50 kuya kumaphesenti angama-70 ezingeni lika-2019, ”kuphetha uMcCartney.
Abalimi Abamhlophe: Icala Elisha Lokuhlehlisa Ubandlululo
AbakwaGlass Lewis babambisana ne-Arabesque ukuthuthukisa ...
I-Jamaica Yamukela Izindiza Ezintsha ezivela ku-German Airline...
Ezokuvakasha eSorrento Coast Ziyahamba Emva Kobhubhane Olunesizungu ...
UMongameli waseTanzania: Umkhankaso wokuqala wabavakashi e ...
Ulwazi Lwabagibeli be-Iberia Advance Ngokusha...
Umthelela Kubuntu: I-FII Institute
ISuper Hornet Fighter Jet Iphahlazeke eCalifornia Desert
ISouthwest Airlines ngeke ibaxoshe abasebenzi bayo ...
UCOVID-19 ubulala ukuhambela amabhizinisi aseMelika
Umbono Wakho Ngokhetho Lwe-UNWTO Oluzayo Uceliwe
Kuqaliswe ezokuvakasha zase-Afrika esezifundeni
I-East African Community yethula izifunda ezintsha ...
Amahhotela: Imali engena ngokuhamba ngezebhizinisi yehle ngama- $ 59 billion ku- ...
Izindawo Ezihamba phambili Zokuvakasha zango-2022
Indiza entsha i-Boeing 777-9 indizela e-Doha International...
Ama-bras namaphenti angama-730: Kuboshwe isela langaphansi kwezingubo zangaphansi ...